मेरो मिठाई साहसिक 🥇 क्रिएटिव स्टप 🥇 🥇
मेरो मिठो साहसिक कार्य
अघिल्लो खेल: ठाउँ भीड
Space Rush अब kiz10.com मा स्पेस रश खेल्नुहोस् !!! नयाँ खेल उत्तम शैलीमा आउँदछ र [...]
अर्को खेल: आदम र हव्वा ..
आदम र हव्वा क्रससी नदी ओह होईन! आदम र हव्वा यस समयमा के भएको छ ?! आदम र हव्वालाई मद्दत गर्नुहोस् [...]
तपाईं शीशाको टाउकोमा एक अन्तरिक्ष यात्री बबलको साथ अनौंठो देखिदैको पराई हुनुहुन्छ। सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, तपाईं क्यान्डी भूमिमा खस्नुभयो। सिक्का स Collect्कलन गर्नुहोस्, राक्षसहरू, पिक्याक्सहरू र बट्सलाई बेवास्ता गर्नुहोस्। बाहिर निस्कन पुग्न प्लेटफर्महरूमा उफ्रिनुहोस्। तपाईंको आन्दोलनलाई अधिकतम सिक्का स movement्कलन गर्न अनुकूलन गर्नुहोस्। ओह, के हामीले उल्लेख गरेका थियौं कि स्तरहरू अन्त्य तिर एकदमै गाह्रो हुन्छ?
# रोमांचक# परिवारमोबाइलबच्चाहरुप्लेटफर्महरूआरा पजल